Wararka - Falanqaynta saadaasha suuqa qaxwada iyo saadaasha saadaasha horumarka
Baaxadda suuqa kafeega iyo falanqaynta saadaasha saadaasha horumarka
Kafee waa mid ka mid ah saddexda cabitaan ee ugu waaweyn adduunka. Waa cabitaan laga sameeyay digirta kafee ah. Waa cabitaanka ugu caansan adduunka oo ay weheliso kookaha iyo shaaha. Iyadoo kor loo qaadayo heerarka nolosha dadkeenna iyo koritaanka joogtada ah ee ka warqabka dhaqanka kafeega.
"Double Eleven" carnival, suuqa kafeega ee internetka oo laga sameeyo koror qarax
Laga soo bilaabo Nofeembar 1 ilaa 3, qaybta kafeega ayaa kordhay 1900% sanadkiiba, taasoo horseedeysa cuntada cusub. Dhexdooda, dhegaha sudhan, dareeraha qaxwada, iyo kafee kaabsolku wuxuu ku kordhay in ka badan 5000%. Iibinta saddexda maalmood ah dhammaantood way ka sarreeyeen sannadkii hore 11.11. Ka dib markii Nestlé uu gaadhay 455% iibinta maalintii ugu horeysay ee kororka Nofeembar 1, guud ahaan iibka shabakada ee ganacsiga kafeega ee Nestlé muddadii u dhexeysay Nofeembar 1 ilaa 3 wuxuu kordhay ku dhowaad 400% sannad-ka-sannad; Waxqabadka iibka 'Starbucks' ee Kaabaaha Guriga ee Ku raaxaysta ayaa ka kordhay 1 ilaa 3 Tani waa 30 jeer tii sanadkii hore ee Double 11; sumadda xiddigga Santon waxay lahayd 220,000 oo amar ah 1-dii Noofambar, iyo iibinta saddexda maalmood ah ee 80 milyan laga billaabo 1-da ilaa 3-da Nofeembar waxay ku dhowaad 3 jeer ka sarreysaa sanadkii hore.
Suuqa kafeega ayaa soo hagaagaya isla markaana kor u kacaya qaxwaha qaaska ee gaarka ah
Marka la barbardhigo waddamada kale, caadooyinka isticmaalka qaxwada ee Shiinaha aad ayey uga yar yihiin wax soo saarka shaaha, laakiin iyadoo la wanaajinayo heerarka nolosha dadkeenna iyo wacyiga sii kordhaya ee dhaqanka kafeega, oo ay weheliso saami-qaybsiga tirada badan ee dadka, waxay kicineysaa isticmaalka kafeega gudaha. Qiyaasta suuqa ayaa sii fideysa. Xogta ayaa muujineysa in sanadka 2018, isticmaalka kafeega qofkiiba ee Shiinaha uu ahaa 6.2 koob, suuqa kafeega wuxuu ahaa 56.9 bilyan yuan. Waxaa la qiyaasayaa in sanadka 2023, kafeega uu cuno qofkiiba uu noqon doono 10.8 koob, suuqa kafeega wuxuu noqon doonaa RMB 180.6 bilyan.
Waqtigan xaadirka ah, cunitaanka kafeega dhulka kafeega ah iyo dhaqanka bulshada ee qaxwada oo ay matalayaan Starbucks waxaa sii kordheysa doorbidayaasha macaamiil badan oo shiineys ah marka la eego cusbooneysiinta isticmaalka. Suuqyada Shiinaha ee suuqyada macaamiisha kafeega ah, noocyada kafeega iyo adeegyada tafaariiqda waxaa ka mid ah: dukaamada qaxwaha aan silsiladda lahayn, kafeega oo lagu iibiyo dukaamada cuntada, kafeega lagu iibiyo dukaamada cabitaanka, kafeega lagu iibiyo habboonaanta, mashiinnada kafeega is-adeegsiga, iwm wax soo saarka kafee ee ugu caansan waddankayga sannadka 2018 waa kafee deg deg ah, oo saamigiisu wuu sii socon karaa. Sannadkii 2018, kafeega degdegga ah ee waddankeyga waxaa lagu qiyaasey in ku dhow 68% wadarta suuqa qaxwada dalkayga, qaxwada diyaar u ah in la cabbo ayaa lagu qiyaasey 10%, qaxwaha xilligan xaadirka ahna lagu qiyaasey ilaa 18%.
Markii ay sare u kaceen alaab deg deg ah oo tayo sare leh, KFC, Luckin, Costa, Yingji, Yuyan, Manner, CoffiiJoy iyo noocyo kale oo qadla'aan ah ayaa bilaabay inay galaan Tmall, iyagoo bilaabay alaab deg deg ah oo tayo sare leh. Noocyada kafeega isla markiiba si tartiib tartiib ah ayey u sii kordhayaan, tartamada suuqyaduna aad ayey u sii adkaanayaan. Horumarka degdegga ah ee ganacsiga elektarooniga ah, barnaamijyada iibka ee internetka sida Tmall iyo tufaaxyada WeChat ayaa soo ifbaxay, iibka qaxwada ee internetka ayaa sii kordhay.
Rajada horumarka warshadaha kafee
1. Goobta isticmaalka kafeega si joogto ah ayey isu beddeleysaa
Sannadihii ugu dambeeyay, horumarka isdaba-joogga ah ee gaarsiinta cuntada iyo warshadaha internetka, macaamiisha gudaha iyo dibaddaba waxay si aamusnaan ah u beddeleen caadooyinkooda isticmaalka ee ah cunnada iyo kafeega. Is-qaadid iyo cunno gaarsiinta ayaa u noqotay isbeddel cusub macaamiisha inay iibsadaan kafee. Dhamaadkii 2017, Ruixing Coffee-ga cusub ee la aasaasay wuxuu furay nooc tafaariiqeed oo cusub oo ah amarka khadka tooska ah ee internetka + soo qaadashada qad la'aanta. Bishii Sebtember 2018, Starbucks waxay si rasmi ah Shiinaha uga billowday adeegga gaarsiinta cuntada ee “Special Star Delivery”; Bishii Oktoobar ee isla sanadkaas, Mcafee wuxuu sidoo kale bilaabay adeeg gaarsiin. Bishii Meey 2019, Starbucks waxay sidoo kale Shiinaha ka billowday adeegga "Brown Express" halkaas oo amarada lagu dhigo internetka lagana soo qaado dukaamada. Bisha Sebtember 2020, quraacda is-qaadista golaha wasiiradda ayaa la galin doonaa hawl tijaabo ah, goobta kafeega lagu cabiro ayaa laga duwanaan doonaa waana la qaadi karaa.
2. Tafaariiqda aan cidi wadin waxay noqon kartaa caadada cusub ee isticmaalka kafeega
Marka la barbardhigo dukaamada, boosteejooyinka casriga ah ee aan cidi wadin waxay u baahan yihiin kharashyo fudud, laguma xaddidno goobaha, waana ka jilicsan yihiin. Sidaa darteed, tafaariiqda aan cidina wadin ayaa caan ka ah Shiinaha. Bishii Janaayo 8, 2020, Luckin Coffee waxay soo bandhigtay laba mashiin oo kafee ah oo aan rasmi ahayn "Rui Instant Buy" iyo mashiinka iibka aan la saarnayn ee "Rui Cost-effective", wuxuuna si rasmi ah u bilaabay "istiraatiijiyadda tafaariiqda ee aan cidna wadin", isagoo si buuxda uga faa'iideysanaya Internetka cusub ee Shiinaha. kaabayaasha waxay kexeeyeen warshadaha tafaariiqda aan cidi wadin inay mar labaad cusboonaysiiyaan Waxaa wada Luckin Coffee, tafaariiqda aan cidi wadin waxay noqon kartaa wax caadi ah oo cusub ee isticmaalka kafeega.
3. Dhadhanka iyo qaabka waxyaabaha kafeega ayaa si tartiib tartiib ah loogu kala duwan yahay
Waqtigan xaadirka ah, xoogga ugu weyn ee suuqyada macaamiisha kafeega ee Shiinaha waxaa ku badan dhalinyarada, kuwaas oo geesinimo leh oo isku dayaya waxyaabo cusub. Sidaa darteed, hal cabitaan kafee ah ma dabooli karo baahidooda muddada-dheer. Noocyada kafeeku waxay u baahan yihiin inay si isdaba-joog ah wax cusub u soo bandhigaan, u soo bandhigaan kuwo cusub, ayna ku fiicnaadaan abuurista waxsoosaarka qaxwada leh “dhibco iib ah” oo gaar ah si ay si joogto ah “u kicin u yeeshaan” rabitaanka macaamiisha inay iibsadaan. Maaddaama suuqa kafeega Shiinaha uu sii kordhayo, waxaa la rumeysan yahay in badeecooyin badan oo kafee ahi ay suuqa ka soo muuqan doonaan.
4. Makhaayadaha IP-ga iyo hal-abuurka ku xeeran horumarinta shilalka
Marka la eego heerka nolosha dadka, dadku kuma qanacsana badeecooyinka caadiga ah ee kafeega ah, waxayna leeyihiin fikrado cusub oo cusub oo ku saabsan dhadhanka kafeega, sida kafeega dhalada ku jira, cabbitaanka kafeega xumbo biir ah, qaxwada caanaha qumbaha lagu kariyey iyo qabow lagu kariyey. gaaska nitrogen Kafee iyo wixii la mid ah; weelku kuma sii koobna koobabka caadiga ah ee kafeega, dhalooyinka sharaabka iyo dhalooyinka biirka ayaa ku wada sugan goobta dagaalka; alaabooyin badan oo hal keli ah ayaa jebiyey soohdinta "kafeega" soo jireenka ah waxayna noqdeen kuwo is-dhexgal badan leh Isku dhaca u dhexeeya kafeega iyo cabbitaannada kale ee ku xeeran ayaa sii xoogeystay, taasoo ka dhalatay alaabooyin ay ka mid yihiin shaah diirka qolofta iyo maaskaro kafee ah. Sanadihii la soo dhaafay, shuruudaha culeyska dadku waxay noqdeen kuwa aad u adag, taasoo keentay waxsoosaarka kafeega ee dufanka yar, kaloriinta yar, sonkorta, iyo borotiinka ku jira.